ချီကာဂိုပထမ option, INC. v. Kaplan: အနု U.S တရားရုံးချုပ်ရဲ့မေးခွန်း Arbitrating (1995)
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက် / ချီကာဂိုပထမ option, INC. v. Kaplan: အနု U.S တရားရုံးချုပ်ရဲ့မေးခွန်း Arbitrating (1995)
ဤသည်အငြင်းပွားမှုတစ်ခုထဲကသညျထ “ဖြေရှင်းသည်” သဘောတူညီချက်, လေးယောက်ကသီးခြားစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ခံပြီး, အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရသော “အထဲကအလုပ်လုပ်” MKI အောက်တိုဘာ၏ရလဒ်အဖြစ်မြှုတ်ကြောင်းပထမဦးစွာ Options ကိုမှအကြွေးတွေ၏ 1987 စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှု.
တွင် 1989, သဘောတူညီချက်သို့ဝငျပွီးနောကျ, MKI တစ်ဦးအပိုဆောင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာဆုံးရှုံးခဲ့ရ 1.5 သန်း. ပထမဦးစွာ Options ကိုပြီးတော့ထိန်းချုပ်ယူ, နှင့် liquidated, အချို့သော MKI ပိုင်ဆိုင်မှု, တစ်ခုလုံးကို MKI ကြွေးမြီ၏ချက်ချင်းငွေပေးချေမှုတောင်းဆိုနေတာနှင့် Kaplan ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမဆိုချို့တဲ့မှုအတွက်ပေးချေရန်ပြောကြားခဲ့သည်.
၎င်း၏တောင်းဆိုချက်များကိုချည်းသွားသောအခါ, ပထမဦးစွာ Options ကို Philadelphia တွင်စတော့အိတ်ချိန်းမတိုင်မီခုံသမာဓိရှာကြ, ပါတီများအဖြစ် Kaplan နှင့်အတူ.
MKI, တစ်ခုံသမာဓိအပိုဒ်တွင်ပါရှိသောသောသာယလေ့ကျင့်ခန်းစာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးလျှင်, လက်ခံခုံသမာဓိ.
အဆိုပါ Kaplan, သို့သော်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြောင်းစာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးမဟုတ်ခဲ့သော, ပထမဦးစွာ Options ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏သဘောမတူခုံသမာဓိခဲ့ကြောင်းငြင်းဆိုနှင့်အနုညာတခုံရုံးနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရေးသားကန့်ကွက်တင်သွင်း.
အနုညာတခုံရုံးကပါတီများ၏တန်ရာအပေါ်အုပ်ချုပ်ဖို့ပါဝါခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်’ ြငင်းခုံ, ထိုသို့ပထမဦးစွာ Options ကို၏မျက်နှာသာအတွက်ပြု.
အဆိုပါ Kaplan ထို့နောက်ခုံသမာဓိဆုပြန်အပ်ရန်ဖက်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံးကိုမေးမြန်း, ပထမဦးစွာ Options ကို၎င်း၏အတည်ပြုချက်ကိုမေတ္တာရပ်ခံနေချိန်မှာ. အဆိုပါခရိုင်တရားရုံးဆုအတည်ပြုခဲ့သည်.
အယူခံဝင်တွင်, တတိယတိုက်နယ်များအတွက်အယူခံတရားရုံးကသူတို့အငြင်းပွားမှုခုံသမာဓိမဟုတ်ခဲ့သော Kaplan နှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့, ထိုသို့သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ဆု၏ခရိုင်တရားရုံး၏အမှုအတည်ပြုချက်ပြောင်းပြန်. ဒါဟာပါတီများခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်၏မေးခွန်းကိုဆုံးဖြတ်သဘောတူညီခဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တွေကမှားစရာသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိမဟုတ်လျှင်ကြောင်းနှီးနှော, တရားရုံးမေးခွန်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့. အပြင်, ပြန်လည်သုံးသပ်များ၏စံချိန်စံညွှန်းများအထူးသို့မဟုတ်တင်းကျပ်သာမန်နှင့်မ.
နောက်ဆုံး, အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ကခွင့်ပြုခဲ့ Certiorari "ဆိုပါကပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အယူခံတရားရုံးအသုံးပြုတဲ့စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ပတ်သက်.အငြင်းပွားမှုခုံသမာဓိခဲ့သည်"နှင့်အယူခံ '' ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏တရားရုံးအတည်ပြုခဲ့သည်.
အဆိုပါတရားရုံးလည်း Kaplan / ပထမဦးစွာ Options ကိုအငြင်းပွားမှု၏ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်သည့်တရားရုံးများအားဖြင့်လွတ်လပ်သောပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဘာသာရပ်ကြီးကြောင်းကိုကျင်းပ, အစားအထူးထက် "သမ္မာသတိ၏အလွဲသုံးစားမှု"စံ, ခုံသမာဓိဆုစှဲခရိုင်တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်များပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါအယူခံ၏တရားရုံးများအစားသာမန်စံချိန်စံညွှန်းများလျှောက်ထားသင့်ပါတယ်.
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ယူနိုက်တက်စတိတ်အနုညာတစီရင်